Vaovao - Manohana mafy ny fisorohana sy ny fifehezana ny valanaretina i Shanghai Jianzhong, manampy ny tsipika famokarana maska ​​Enpak
Shanghai Jianzhong dia orinasa manokana amin'ny famokarana vokatra fanaraha-maso. Taorian'ny niainany ny batisan'ilay valanaretina satro-boninahitra vaovao, ady tsy misy vovoka, ny orinasanay dia nanangana tsipika famokarana sarontava lehibe, ary ny vokatra azo avy amin'ny sarontava marika Enpak dia mahatratra 50.000 isan'andro. Miaraka amin'ny fahatsapana tsikelikely ny fangatahana ao an-trano dia nanitatra ny orinasany any amin'ny firenena vahiny ny orinasanay. Amin'izao fotoana izao dia misy karazana sarontava roa aondrana: saron-tava fanadiovana fanary sy sarontava fandidiana ara-pitsaboana. Ireo firenena fanondranana dia misy firenena maherin'ny 50 ao anatin'izany i Eropa, Azia atsimo atsinanana ary Moyen Orient.
Manana atrikasa famokarana sarontava tanteraka ny orinasanay. Ny atrikasa madio sy tsy misy vovoka amin'ny haavo 100,000 dia mahafeno ny fenitry ny atrikasa amin'ny famokarana sarontava. Ny fizotry ny famokarana dia mifanaraka amin'ny ISO13485: 2016 "Rafitra fitantanana kalitao momba ny kalitaon'ny fitsaboana amin'ny fitakiana fanaraha-maso". Dingana enina lehibe no mahatonga ny viriosy afaka manararaotra: 1. Taratasy orona plastika, mifanentana kokoa amin'ny orona; 2. Ampifanaraho amin'ny endrika amam-bika, omeo ny adhesion tsara indrindra; 3. Tady landihazo avo kofehy matevina, sofina ahazoana aina fa tsy henjana; 4. Fitsaboana herinaratra, fanatsarana ny vokatry ny sivana, fitrandrahana rivotra tsara kokoa; 5. Fitaovana fampiasa amin'ny hoditra marefo, malefaka ary tsy mahasosotra; 6. Vodilaharana mirindra, tsara tarehy sy malala-tanana.
Ny orinasanay dia manana ny mari-pahaizana fanondranana tanteraka sy ny famatsiana azo antoka. Ny fanamarinana CE Eoropeana, ny sarontava fandidiana ara-pitsaboana dia nampiana amin'ny lisitra fotsy an'ny Minisiteran'ny Export Commerce. Ny index maska ​​tsirairay dia manana ny tatitra fanamarinana ny maso ivoho fanandramana: ny tatitra momba ny fitsapana navoakan'ny TUV South German Certification and Testing Center izay mihaona amin'ny sarontava fandidiana fitsaboana EN14683 EU; ny fitsapana PONY Puni dia namoaka fahombiazan'ny filtration 99%, ary ny fepetra fanoherana ny taovam-pisefoana dia mifanaraka amin'ny tatitry ny fitsapana GB T 32610 -2016 momba ny masonkarena fiarovana isan'andro. Ny orinasanay dia manana fahaiza-manao famokarana miorina, fandefasana ara-potoana ary isa naoty A mandritra ny taona maro. Orinasa manana fiaraha-miasa maharitra.
Teny an-dalana dia feno fankasitrahana izahay. Feno fankasitrahana aho noho ny fanohanan'ny mpitondra amin'ny ambaratonga rehetra. Handalo ihany ilay valanaretina amin'ny farany. Ny mailo amin'ny fotoanan'ny fandriam-pahalemana sy ny matanjaka dia ny fahaveloman'ny orinasa maharitra. Ao anatiny, manavao ny rafitra fitantanana izahay, manangana rafitra orinasa maoderina feno kokoa, manafaingana ny fanavaozana ny teknolojia ary manatsara ny fifaninanana fototra amin'ny vokatra; ety ivelany, miezaka izahay manaparitaka ny ampihimamba ny teknolojia ivelany sy ny sakana amin'ny varotra, ary manatsara ny laza iraisam-pirenena sy ny lazan'ireo marika nasionaly Noho izany antony izany, manantena aho fa ny sarontava mason'ny marika Enpak dia mivarotra tsara erak'izao tontolo izao.